Porn ကိုသုံးတာကိုဖြတ်လိုတဲ့စွဲလမ်းသူအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလဲ နော Church ဘုရားကျောင်းနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (အပိုင်း ၂) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
ဒါဟာ Porn အသုံးပြုခြင်း Quit တစ်ခုစွဲဘို့လိုပဲကဘာလဲ? နောဧသည်ဘုရားကျောင်း (အပိုင်း 2) နဲ့အင်တာဗျူး
[အပိုင်း 1 "ဒါဟာ Porn စွဲ Be မှလိုပဲကဘာလဲ?"]
ငါ၏အခုနှစ်မှာ ယခင်ပို့စ် ဒီ site ကိုမှ, နောဧနှင့်ငါကသူကြုံတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အခြားအကျိုးဆက်များဆိုးရွားလာခဲ့သည်ဘယ်လောက်, porn စွဲ-ဘယ်လိုစတင်ခဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ Pre-ပြန်လည်နာလန်ထူအတွေ့အကြုံကိုဆွေးနွေးကြသည်။ ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့နာလန်ထူစသည်သူ၏ခရီးဆွေးနွေးပါ။
ငါ 24 တုန်းကငါ OK ကိုယခုငါအဆင်သင့်ပါပဲ "နေသေးတယ်, ငါသည်အလုံလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့မိပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့, ဤသူကားအဘယျသို့ထွက်တွက်ဆသွားတာပါ။ "ကျနော့်ကိုအဖြေကိုများအတွက်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ခဲ့တဲ့အရာငါအငယ်စဉ်အခါ 2008 အတွက်အဖြေကိုနောက်ကျောအဘို့အရှာနေစတင်ခဲ့ပြီးထိုနညျးတူ, စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် 2008 အတွက်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေဘာမျှရှိ၏။ ကျွန်မတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုဤအချိန်စှာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအလားတူပုံပြင်များနှင့်အတူအများအပြားယောက်ျားတွေ, ငါ့အသက်အရွယ်န်းကျင်ယောက်ျားတွေ၏ပုံပြင်များသူတို့တသမတ်တည်းနှစ်ပေါင်း porn ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုပြောပြရန်တွေ့ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်ဦးကိုမှန်ကန်နှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းရနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ မိတ်ဖက်။
ငါသည်သင်တို့ကို YourBrainOnPorn.com နှင့်အလားတူက်ဘ်ဆိုက်များကိုတွေ့ယူဆ?
yeah, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ TEDx ဆွေးနွေးချက်တွေ့ မဟာ Porn စမ်းသပ်မှုနှင့် [မိမိ website ကိုမှငါ့ကိုဦးဆောင်YourBrainOnPorn.com] ။ ထိုအရပ်မှငါသည်သည်အခြားပစ္စည်းပစ္စယတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့အားလုံးပဲငါနှင့်အတူပါသွားခဲ့သောအရာကိုဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာရုံနဲ့အခြားယောက်ျားတွေဒီမှတဆင့်ခဲ့, သူတို့မှတဆင့်သွားပြီနှင့်အခြားဘက်မြင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်ဖူးကြောင်း, တော့ဘူးငါတယောက်တည်းမဟုတျကွောငျးကို သိ. ကြီးမားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုညစ်ညမ်း သိ. နောက်ဆုံးတော့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်ပွင့်လင်း။ ရှိခဲ့ပါသည်တူသောငါ့အသက်ကို-အထဲတွင်ဖြစ်ပျက်သမျှဒီနာကျင်မှုများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်ခဲ့သည် ဒါနဲ့အမှန်တကယ် porn ဖြတ်နှင့်တိုးတက်မှုကိုမြင်လျှင်နှင့်နောက်ဆုံးတော့ငါ့နောက်သို့ကြောင့်ချပြီးအကြောင်းကိုအတော်လေးပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
သင်အောင်မြင်ရန်ငှါ, porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ
ကောင်းပြီ, ငါလုပ်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးအရာဖြောင့်အကြောင်းကိုသုံးရက်ရေးခဲ့သည်။ ငါ၏အလိင်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုသမိုင်း, ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ငါ့ဆက်ဆံရေးကို, အရာအားလုံး: ငါ့ကိုငါအတွင်းအပြင်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သမျှကိုထုတ်ရေးသားခဲ့သည်။ ကိုယ့်ငါသင်ယူခဲ့ရာ, ထိုအချိန်ကခံစား, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျွန်မရဲ့ပန်းတိုင်အနာဂတျအတှကျခဲ့ကြသည်ခံခဲ့ရပုံကိုစက္ကူပေါ်မှာအားလုံးထွက်ရချင်တယ်အဖြစ်။ ဒါကတကယ်လုံးဝနောက်ကွယ်မှ porn စွန့်ခွာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေ recover နှင့်တစ်ဦးစိတ်ကျေနပ်စရာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှာဖွေခဲ့သောငါပြီးမြောက်ဖို့လိုခငျြအရာကိုအာရုံစိုက်ရောက်စေဖို့, အခြို့ရှင်းလင်းပြတ်သားကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
တကယ်တော့ရန်, အမည်ဝှက်, တစ်ဂျာနယ်အဖြစ် posted သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Rebalancedတစ်ခုအွန်လိုင်းထောက်ခံမှုဖိုရမ်ဖြစ်၏။ ဒါကငါ့စာအုပ်၏အစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်, Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ။ ငါပြန်လည်ကောင်းမွန်အဖြစ်ငါသည်ငါ့ဂျာနယ်ထဲမှာမှတ်တမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆက်လက်ထွက်ရှိစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိခဲ့တူသောငါခံစားမိခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်တကယ်ငါကဲ့သို့သောသူတစ်ဦးဦးအတွက်လိုအပ်မယ်လို့သိကျွမ်းခြင်းပညာ encapsulated သောဤပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပို. ပို. ရေးသားဖို့လိုသို့လှည့် recover ရန်အလို့ငှာ။ ကိုယ့်ငါ 16, 17, 18 ခဲ့သောအခါငါလိုအပ်သောစာအုပ်ရေးဖို့ချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်နည်းနည်းပြန်ရစ်ကြည့်ဘယ်လိုငါညစ်ညမ်းဝေးရသနည်း ငါ "အဘယ်သူမျှမကျွန်မအသက်တာ၌, မှာမလိုချင်ကြဘူး, တူ, ယခုငါကိုယ့်တရာရာခိုင်နှုန်းကိုကျူးလွန်ခဲ့ညစ်ညမ်းနဲ့ဆက်စပ်နိုင်အောင်အများကြီးနာကျင်မှုကိုကြောင့်ကနဦးကာလ၌ကရိုးသားဖို့, တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်ခဲ့သည် အားလုံး။ "ကျွန်မကိုလည်းအချိန်မှာဆက်ဆံရေးအသစ် စတင်. ခဲ့ကြောင်းကျိန်းသေကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါသူမ၏အပေါ်နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်နေပေါ်နှင့်ညစ်ညမ်းစဉ်းစားဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံမအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။
အချိန်ပေါ်သွား, ငါတည်ငြိမ်တိုးတက်မှုသတိပြုမိသည်။ အဲဒီမှာငါ့အရည်းစားမတိုင်မီအကြောင်းကိုနှစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလ (ထိုအချိန်က) ခဲ့ကြသည်နဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုသို့ဿုံအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာတနေ့ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသကဲ့သို့ချောမွေ့မဟုတ်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်အစဉ်မပြတ်ငါကဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကြီးအဖြစ်။ ငါကအောက်ပါလကျော်တိုးတက်မှုကြည့်ဖို့ဆက်ပြောသည်။
သငျသညျ relapsing မပါဘဲအစောပိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အဖွဲ့ဟာမှတဆင့်သှားသလော
ကောင်းပြီ, ခဏငါပြု၏။ ကျနော်ကျိန်းသေငါမှခွင့်ပြုမယ့်မခံခဲ့ရကြောင်း, ဒီကျော porn ထဲသို့ငါ့ကိုပစ်သွားမခံခဲ့ရကြောင်း, ထိခိုက်နာကျင်ရောထွေးနှင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်ငါကျူးလွန်ခဲ့သော, ငါတည်းဟူသောငါ၏စာအုပ်၌ဤရေးသားခဲ့သည်, တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း entry ကိုခံခဲ့ရ ဖြစ်ပျက်။
ဒါကသုံးလခနျ့အတှကျစစျမှနျတဲ့ကျင်းပ, ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး relapse ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံကငါ့အဘို့အလွန်အမှတ်ရစရာပါပဲ။ ဒါဟာငါ့အစိတျထဲတှငျပြန်လှန်မယ့် switch ကိုနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ ငါတယောက်တည်းခဲ့, ငါအခန်းထဲမှာပဲ, ရုတ်တရက်ရှိသမျှတို့, တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်, ညစ်ညမ်းနောက်တဖန်ငါ့အဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေရုံမျက်နှာပြင်မှထ, ငါတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အ Jonesing ခဲ့သည်တူသောငါခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ့နှလုံးလျင်မြန်စွာတကယ်ရိုက်နှက်ခဲ့လှုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မချုံးချုံးကျသွားတယ်။ ကိုယ့်တိုက်ခိုက်နေ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူရုန်းကန်နေလောက်နာရီဝက်အဘို့အကြှနျုပျ၏အခန်းထဲမှာပွေးညီ။ "ငါသည်ဤအမှုကိုသို့မဟုတ်ငါမသင့်? သငျ့ပါ" ထိုအခါငါစစ်တိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ထဲမှာ ပေး. ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဲဒီနောကျ, တကရုန်းကန်ခဲ့ပါတယ်။ ငါနှစ်ပတ်အတွင်း, နှစ်လ porn-အခမဲ့ဖြစ်ပေမယ့်ပြီးတော့တစ်ဦး relapse ရှိသည်, ကအပြီးအပိုင် porn-အခမဲ့ဖြစ်ဖို့ဘယ်လို relearn မှငါ့ကိုယခုနှစ်ပိုမိုကောင်းမွန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူလိမ့်မယ်။
အဲဒီအတွေ့အကြုံကကျနော်ပြီးသားတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့အထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ငါကျွမ်းကျင်သူအချို့မျိုးဖြစ်လို့ယူဆတယ်ခံသောကြောင့်သေချာဖြစ်, တစ်ဦးပျက်ကွက်နဲ့တူခံစားခဲ့ရပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်သင်သိ, ငါ၏ဘဝ၌ဤအချိန်တွင်ပြန်ရှာနေ, ကငါ့ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုအများကြီးဆုံးမသွန်သင်နေသောကြောင့်ငါအထူးသဖြင့်ထိုကာလအတွက်နောင်တမရကြဘူး, ဒါငါ့ကို porn ရှိသည်နိုင်ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့အာဏာအများကြီးပိုပြီးစာနာနှင့်နားလည်မှုပေးခဲ့တယ် လူမျိုးကိုစိုး။ ငါနဲ့အတူတူပါပဲမှတဆင့်ရုန်းကန်နေကြသောသူတို့အဘို့ယခုပိုကောင်းတဲ့နည်းပြတယ်နဲ့တူငါသည်လည်းခံစားရသည်။
ဒါကအင်တာဗျူးနောဧနှင့်ငါစပီကာများနှင့်နည်းပြများနှင့်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားအကြောင်းအရာများအဖြစ်သူ၏လက်ရှိအလုပ်နှင့်အတူ, (စိတ်ဒဏ်ရာ-မောင်းနှင်စောစော-အသုံးပြုမှုကိုမောင်းနှင်) သည်ကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်း-အလွဲသုံးစားလုပ်လူဦးရေဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အတူ, ဒီ site ကိုငါ့လာမယ့်ပို့စ်တွင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
မူရင်း post: ဒါဟာ Porn အသုံးပြုခြင်း Quit တစ်ခုစွဲဘို့လိုပဲကဘာလဲ? နောဧသည်ဘုရားကျောင်း (အပိုင်း 2) နဲ့အင်တာဗျူး